Taariikhda erayga "Negro" ee isir quudhsiga ah - (HILLAAC.NET) THE BEST INDEPENDENT RELIABLE SOMALI NEWS
Taariikhda erayga “Negro” ee isir quudhsiga ah
October 17, 2020 at 19:08 Taariikhda erayga “Negro” ee isir quudhsiga ah2020-10-17T19:08:55+02:00 WARARKA SOOMAALIYA
25 Daqiiqadood ka hor
Xigashada Sawirka, .
“Waa erayga ugu xun, ugu liita ee ugu foosha xun Af-Ingiriisiga.”
Aragtidaasi waxay ahayd tuu qabay dacwad ooge Christopher Darden markii adeegsiga erayga “Negro” lagu soo qaaday dacwad dil ah oo lagu soo eedeeyey ciyaaryahanka Maraykanka ah ee OJ Simpson sannadkii 1995.
Waana aragti ay dad badan ilaa maantadan qabaan.
BBC-da ayaa waxa soo gaadhay cabashooyin ka badan 18,600 oo lagaga dacwoonayo eraygaas oo keenay weerarro ba’an oo dhacay bishii Juulaay.
Markii hore way ku adkaysatay laakiin agaasimihii hore Tony Hall ayaa markii dambe raali gelin ka bixiyey oo yidhi “khalad” ayay ahayd.
Arintani waxay dhalisay in BBC-du shaqaalaheeda u dejiyo xeerar cusub oo ku saabsan adeegsiga erayada isir quudhsiga ah, kaas oo la faafiyey Arabacadii.
Waxay haatan sheegtay in ay waajib tahay in “sababo tifaftir oo gaar ah loo helo adeegsiga erayada qallafsan ee isirka ah” waana in arintaa ay si shakhsi ah u ansixiyaan agaasimeyaasha sarsare ee wakaaladdu.
Markaan maqlo eraygaa jidhkaan is geliyaa. Waxaan xasuustaa aabahay oo dhegihiisa ay ku soo dhacayaan erayda ah “qabo N….” isaga ay dariiqyada magaalada Liverpool eryanayaan taageerayaal cunsuriyiin ah oo kubadda cagta ahi mar uu u daawasho tagay Man City oo ciyaaraysay.
Eraygan waxa taariikhdiisu ka soo bilaabantaa waagii adoonsiga.
Xagaagii 1619 ayay ahayd markii markab sida 20 qof oo Afrikaan ahi ku xidhay dekad ku taal gobolka Virginia iyaga oo silsilado ku xidhan oo adoomo ahaan loo iibinayey.
Waa dhacdadii u horraysay ee qoraal la hayaa muujinayo in ay ahayd markii u horaysay ee adoomo Maraykanka la geeyey, waxaana dadkaa Afrikaanka ah lagu tilmaami jiray erayada Af-Isbaanishka iyo Af-bortaqiiska ah ee madow oo ah halka eraygaasi ka yimid.
“Run ahaantii waxa eraygani la xidhiidhaa aragtida ah in dadka Afrikaanka ahi aanay aadame dhab ah ahayn” ayuu yidhi Kehinde Andrews oo ah borofesor ka dhiga taariikhda dadka madow jaamacada Birmingham City Univeristy.
“Waxa ahaayeen xawayaan oo kale oo aadame looma haysan, dameerro. Waa la kala iibsan jiray maraakiibtaa laga tuuri jiray haba yaraatee wax xuquuq ahna may lahayn”
“Markaa kolka erayga N waxa loo adeegsan jiray in dadkaa lagu tilmaamo, markaa waxaan rajaynayaa in dadka badankoodu fahmayaan sababta eraygaasi uu u yahay eray quudhsi ah oo dhibaato dhalin kara sababta oo ah ilaa maatadan isla macnahaas baa loo adeegsadaa.”
Si aad u fahamto sidii loo adeegsan jiray eragya waa inaad daawataa filimada ay ka mid yihii 12 Years a Slave oo aad fahantaa sida eraygaasi loogu adeegsan jiray in dadka madow loo dareensiiyo in aanay qiimo lahayn oo ay dadka kale ka hooseeyaan.
Taariikh ahaan xagan UK waxaad ogaanaysaa qaabab loo adeegsan jiray eraygaas oo sidii magac “kalgacal” oo kale ah laakiin ilaa maatadan wuxuu leeyahay eragysaasi macnayaal taban.
Xigashada Sawirka, Alamy
Erayga oo dhamays tirani wuxuu naanays u ahaa saynisyahankii Ingiriiska ahaa ee Charles Darwin oo afadiisii Emma ay ku qori jirtay waraaqaha ay isku dirayaan sannadihii 1840-meeyadii.
Waxay u adeegsatay “eray kalgacayl leh” isaguna wuxuu u adeegsaday “si kaftan ah oo uu ku muujinayey in ninku xaaskiisa adoon u yahay” sida ay caddaynayaan qoraaladii ay isku direen ee lagu hayo xarunta Darwin Correspondence Project.
Dagaalkii Labaad ee Dunida ka dib, ayaa cunsuriyadda lagu takooray dadka madow iyo kuwa Aasiya ee UK uga soo haajiray dalalkii Barwaaqo Sooranka, kuwaas oo iyaguna erayga u arkay erayga loo adeegsanayo in lagu caayo isirkooda maalin walba oo xataa wuxuu galay siyaasaddii.
Doorashadii sannadkii 1964 ayaa xildhibaankii ka tirsanaa xisbiga Conservative-ka, Peter Griffiths, wuxuu ku guulaystay kursiga degmada Smethwick ee gobolka West Midlands ka dib markii uu ololihiisa u adeegsaday eraygaas “hadaad doonayso inuu deriskaaga noqdo qof N…. ahi u codee xisbiga Labour-ka” ayaa hal ku dheg u noqotay ololihiisa oo waliba erayga oo qoraalkiisu dhamays tiranyahay loo adeegsaday.
Doorashadaasi 50 sanoka hor ayay dhacday, laakiin ilaa maanta eraygaa quudhsiga ah ilaa maantadan waxa loo adeegsadaa isla macnahaas.
Sannadkii 2017 ayaa xildhibaan ka tirsan xisbiga Labour-ka, Diane Abbott, waxay shaacisay in si joogto ah eraygaa ay cusnuriyiintu ugu yidhaahdaan oo ay fariimo ugu soo diraan email-ka iyo baraha bulshada ee internet-ka.
Sannadkii 2018 ayaa eraygada “no blacks” oo ah qaab cusub oo loo dhigayo erayga N ay dadku ku bilaabeen qosyka Kesese saacado uun ka dib markay u guureen xaafad cusub oo ku taal Rochdale, Greater Machester.
K-Dogg oo ah heesaa kana shaqeeya wakaaladda caafimaadka ee NHS ayaa sheegay in eraygaas dad adeegsanayaa ay ku qayliyeen oo ay jiidhsiiyeen baabuur bishii Juulaay weerarkaas oo la sheegay inuu ahaa mid cunsuriyadi sabab u ahayd.
Hase yeeshee dadka oo dhami eraygan uma arkaan inuu dhibaato leeyahay.
Sannadkii 2013 ayaa daawadayaasha BBC qaarkood ka cadhoodeen in qayb ka mid ah musalsalka Fawlty Towers laga jaray weedho eraygaasi ku jiray waxaanay sheegay in arintaasi tahay “taariikhda oo la daboolayo.”
Sannadkii 2015 ayaa barnaamijka Radio 1 ee Newsbeat wuxuu sameeyey ra’yi ururin uu ka qaaday 3000 oo qof oo da’doodu u dhaxayso 18-29 jir kaas oo muujiyey in rubuc iyo dheraad adkaasi ay la ahayd in aan wax dhib ahi ku jirin hadii eraygaa xaalado gaar ah loo adeegsado.
“Hadii aanad ahayn qof madow eraygaa kaftan ahaan uma adeegsan kartid. Sida aan anagu u adeegsano uma adeegsan kartid. Suurto gal maaha, sababta oo ah adigu kama mid tihid dadka isku wada midabka ah ee isku dul qaadan kara.”ayuu yidhi borofesor Andrews.
Laakiin waxa jira dad kale oo qaba in haba yaraatee aan eraygaa qofna adeegsan isirkuu doono ha ahaadee.
“Malahayga waa erayga ugu foosha xun ee ugu liita Af-Ingiriisiga” ayuu yidhi xildhibaan David Lammy oo ka tirsan xisbiga Labour-ka oo bishii Ogost la hadlayey idaacadda LBC Radio.
Wuxuu sheegay in uu fahamsan yahay taariikhda erayga ee ah macnihiisa quudhsiga ah, waxaanu intaa ku daray “waxaan leeyahay wakhtigii waa is bedelay oo waxa la gaadhay goortii aynu iska tuuri lahayn. Hadii aad aaminsantahay in dadka madow naftoodu qiimo u leedahay sida ta dadka kale, eraygan ha adeegsan oo iska diid.”
« The Fifth Clans of Somalia Must Form Alliances
Ethiopia approved by Somalia to bring in khat, Kenya remains banned- airport official »
Wadaxaajoodyadii Biyo Xireenka Niil oo Maanta Furmay
Arday Lacago Ka Dhacay Bangi Ku Yaalla Kenya oo Maxkamad Lasoo Taagay